अब भैँसी बेमौसममा ब्याउने
भरतपुर, वैशाख १४ गते । बेमौसमी फलफूल र तरकारी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरो सुनिरहेका बेला भैँसी पनि बेमौसममै ब्याउने प्रविधिको विकास भएको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय जनावर शास्त्रतर्फका विज्ञहरूको अनुसन्धानले नेपालमा बेमौसममा भँैसी ब्याउने प्रविधिको विकास गरेको छ । जसले बेमौसममा पनि सहजै भैँसीको दूध खान पाउने व्यवस्था हुने देखिन्छ ।
सामान्यतया भैँसी ब्याउने समय हिउँदलाई मानिँदैन । भैँसी ब्याउने मौसम वर्षाद्को समय साउन, भदौ महिना मानिन्छ तर अहिले बेमौसमी समय हिउँदमा पनि भैँसी ब्याउन सकिने विश्व विद्यालयका विज्ञहरूको अनुसन्धानले काम गरेको छ ।
भैँसीका लागि हिउँदको मौसममा न्यून प्रजनन क्षमताको समय हो । यो मौसममा प्रजनन क्षमता बढाउनको लागि प्रविधिको विकास सफलोन्मुख भएको छ, विश्व विद्यालयका अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक प्रा. डा. भूमिनन्द देवकोटाले भन्नुभयो, भैँसीलाई सुख्खा मौसममा ब्याउन सक्ने प्रविधिको विकास नेपालमै सम्भव भएको छ ।
देवकोटा नेतृत्वको टोलीले नेपालमा सन् २०१३ देखि गरेको अनुसन्धानले भँैसीको प्रजनन क्षमता बढाउने विषयमा सफलता हात लागेको हो । अनुसन्धानका क्रममा रामपुरमा नौमध्ये पाँचवटा र पोखरामा सातवटामध्ये दुई वटा भैँसी ब्याएका छन् । यस अघि अघिल्लो वर्ष यही प्रविधिबाट दसवटा भैँसीमा गरिएको यो परीक्षण चारवटा भँैसी ब्याएका थिए ।
हिउँदको समयमा गर्मी तथा सुख्खापन, पर्याप्त पोषणको कमी एवं तनावका कारण भँैसीले गर्भाधारण गर्न नसक्ने समय भएको विज्ञ बताउँछन् । यही समयमा जुका, नाम्ले, माटेजस्ता परजीवीले पनि भँैसीलाई सताउँछ । यही मौसममा भैँसीलाई नियमित परजीवीहरूको औषधि खुवाउँदै पोषणयुक्त खाना खुवाएर विशेष किसिमको हर्मोन प्रविधि प्रयोग गरेर भँैसीलाई हिउँदको समयमा पनि प्रजनन योग्य बनाउन सकिएको प्रा.डा. देवकोटाले बताउनुभयो ।
देवकोटाले भन्नुभयो, भैँसीमा विशेष किसिमको हर्मोन प्रविधि विकास गराएर प्रजननका लागि योग्य बनाइन्छ ।
विशेषतः हिउँदको मौसम दूधका लागि अभावको समय मानिन्छ । वर्षाद्मा भन्दा हिउँदमा नेपालमा दूधको उत्पादन कमी हुन्छ । यो प्रविधिको विकाससँगै अब हिउँदमा पनि भैँसी ब्याउन थालेपछि नेपालमा हिउँदमा पनि दूध उत्पादन बढाउन सकिने विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् । साउनमा पोषिलो खाना बढी खान पाएपछि भैँसीहरू कात्तिकसम्म बढी बाली लाग्छन् तर अलिले भएको नयाँ प्रविधिले बाह्रैमास भैँसी ब्याउने देखाएको छ । विशेषतः भँैसीमा पुसदेखि फागुनसम्म प्रजनन क्षमता ह्रास आउँछ । चैत, वैशाखजस्ता महिना त भँैसीका लागि रुखो मौसम भएकाले भैँसीको शारीरिक विकासमै समस्या पर्छ ।
नेपालमा ५२ लाखको हाराहारीमा भैँसी रहेको अनुमान गरिएको छ । स्थानीय नश्ल जातका लिमे, पार्कोटे र गड्डी भैँसी नेपालमा पाइन्छ । तराईका क्षेत्रमा मुर्रा जातका भैँसी पनि पालिन्छ । अहिले गरिएको प्रजनन प्रविधिमा मुर्रा जातका भँैसी बढी प्रभावकारी मानिएको छ ।